အခြေချတဲ့ | Information about immigration to USA | USAHello
သင့်အခွင့်အရေးများကိုသိပါ: how to talk toapolice officerသငျသညျရဲ afraif Are? သင့်အခွင့်အရေးများကိုသိပါ! အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌နေထိုင်သူတစ်ဦးအဖြစ်, သင်တစ်ဦးရဲအရာရှိစကားပြောသည့်အခါကဒီမှာသင်သိသင့်ပါတယ်အနည်းငယ်အရာဖြစ်ကြ၏